Druzhba mkpụrụ vaịn: nkọwa dịgasị iche iche na foto, akụkọ ihe mere eme, ọdịdị na mbido ka ọrịa - Ugbo - 2019
All-purpose table muskatny grade - Enyi enyi: foto na nkọwa
Ọtụtụ mgbe, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-eche ajụjụ banyere ịhọrọ ụdị mkpụrụ vaịn kachasị mma maka ịmalite n'oge okpokoro okpomọkụ ha.
Ọ bụrụ na mpaghara ebe ndịda dịka ọ bụla dịgasị iche iche dị mma nke ọma, na warara anyị na-elekọta mkpụrụ vaịn chọrọ mgbalị ndị ọzọ, oge na ụgwọ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dị mkpa na ụdị dịgasị iche iche bụ ihe zuru ụwa ọnụ ma dabara adaba maka nri nri ụlọ, ihe ọṅụṅụ, na iri nri.
Taa, anyị chọrọ ịkọrọ gị otu n'ime ụdị mkpụrụ vaịn kachasị mma na aha Druzhba.
N'etiti ndị dị n'ụwa nile, a maara Kishmish Jupiter, Lydia na Alexander.
Mkpụrụ Enyi Mkpụrụ: nkọwa dịgasị iche
Ọbụbụenyi na-ezo aka n'ọtụtụ mkpụrụ vaịn na-acha vine vaịn na oge tomato na-eto eto. N'ime ubi nke Lower Pridonya, mkpụrụ osisi chara acha gburugburu iri abụọ nke Ọgọstị ma ọ bụ na njedebe nke 110-115 ụbọchị na-eto eto. N'iji ya tụnyere Druzhba, ụdị Shasla dịgasị 10-14 ụbọchị ka e mesịrị.
The Transformation, Gordey na Julian nwekwara ike ịnya isi na mmalite ripening.
Osisi vaịn dịgasị iche iche ike nke ibu. Okooko osisi bisexual. A na-edozi epupụta n'enweghị usoro ọ bụla, ọ na-adịkarịghị ezuru, ọ bụghị nnukwu, ìhè akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba. Ogwe na alaka dị iche iche, oke ma sie ike;
Mkpụrụ vaịn nke na-achọ ịkara ogo, ọdịdị dị ka mmiri na ịdị elu dị elu. Ná nkezi, ịdị arọ otu ụyọkọ bụ 280-300 grams;
Monochromatic tomato, okpokoro, nnukwu ibu (2.2-2.3 cm), 3.5-4 grams ọ bụla. Agba nke tomato bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha ọcha ọcha, na-enwu na anyanwụ na amba ma ọ bụ ndo edo edo.
Pulp meaty, kemmiri ihe. Ihe ísì ụtọ dị ụtọ na ekpri ụtọ na nutmeg. Mkpụrụ vaịn na-emeju shuga - 20% na acidity nke 6-7 grams kwa liter. Akpụkpọ ahụ dị mkpa, ọ na-adịkarịghị eche mgbe ị na-eri nri. Achịcha nsị - isi ihe 9.4.
Ihe dịgasị iche iche dị mma maka nkwadebe nke wine compotes. Enwere ike iji maka canning, mmiri na iri nri. Nri nchịkọta nke mmanya vaịn sitere na ụdị Druzhba dị iche iche bụ pasent 8.6, ọnụ ahịa na-egbuke egbuke bụ isi 9.4.
A na-ejikwakarị mmanya eme ihe na August, Buffalo na Ɛpo.
Mkpụrụ vaịn mkpụrụ osisi "Enyi":
Odi iche iche di iche iche abiala ekele n'oru ndi oru nke ndi ndu Russia sitere na Institute of Research Scientific and Technical Information na Bulgarian wine-growers NIIViVa. Villan Blan, Misket Kayleshki na Muscat nke Hamburg bụ ndị a họọrọ maka ịgafe. A rụrụ ọrụ ahụ n'okpuru nduzi nke Potapenko Ya.I. Ihe dịgasị iche iche agafewo ule ahụ nke ọma ma kwadoro maka ịgha mkpụrụ n'akụkụ dị iche iche nke mba anyị.
Ekelere Potapenko, Amirkhan, Amethyst na August.
Ihe dịgasị iche iche na-emepụta mkpụrụ akụkụ (ruo 150-170 centent). A na-eme ka àgwà dị mma site na nlekọta kwesịrị ekwesị na mgbe niile. Na-etinyekwu anya na ịgbara mmiri, kwesịrị ekwesị akuku na transplanting, mgbe niile kwachaa ma nri, ọrịa ọrịa;
Lezienụ anya n'eziokwu ahụ bụ na a na-emekarị ọtụtụ anya n'ọhịa. Ọ bụ ezie na alaka mkpụrụ vaịn dị ike ma nwee ike iguzogide nnukwu ibu, ọtụtụ mkpụrụ tomato anaghị adaba, karịsịa na ọnọdụ ihu igwe nke warara anyị. Ezigbo ọrụ na ohia - 30 anya (ihe karịrị 35);
Ụdị ntu oyi dị elu. Bushes nwere ike idi ihe ruru -20 -23 ogo na oyi. N'otu oge ahụ, cheta na mkpụrụ vaịn bụ ọkụ na-ahụ n'anya ma chọọ ebe nchekwa ọzọ n'oge oyi.
Nnyocha nke ndị na-aṅụ mmanya vine na-egosi na n'ime afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ bushes akpawo na mberede mgbanwe na okpomọkụ karịa ọrịa, pests na ọbụna igurube ọgụ;
Maka ụdị dịgasị iche iche, a na-atụ aro ya iji mkpuchi zuru ezu na ogologo mkpụbelata. Nlekọta anya anaghị echebe osisi ahụ nke ọma.
Onye oru ugbo maara ihe kwesiri imata na ihe di iche iche nwere ezigbo enyi na Shasla root x Berlandieri 41 B, Berlandieri x Riparia Kober 5 BB.
N'etiti ndị na-eguzogide ọgwụ dị iche iche na-agụnye Pink Flamingo, Super Extra and Beauty of the North.
Ihe dị iche iche nke Druzhba dị iche iche bụ na ọ nwere nnukwu iguzogide mildew (2.5-3 isi) na isi awọ (3-3.5 isi), phylloxera (isi 4).
N'agbanyeghị nke a, ndị na-elekọta ubi kwesịrị ịṅa ntị na mgbochi. Ọbụna mmegide kachasị na-eguzogide ọgwụ ga-adị ike ma ọ bụrụ na anaghị elekọta mkpụrụ vaịn n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Maka ebumnuche nke prophylaxis, na-eduzi ịmepụta ihe dị iche iche maka mgbochi (1-2 ugboro), nakwa site na oidium dị ka ndị ọrụ ubi na-atụ aro ya.
Jiri nlezianya na-aṅụ mmiri ahụ. Enweghị mmiri mmiri dị ize ndụ dịka ụfe ya.
Na-eme kwachaa kwachaa. Wepu alaka ochie, gbajie agbaji. A na-emepụta mkpụrụ vaịn mkpụrụ vaịn na 6-8 buds.
Jiri nlezianya wepụ akwụkwọ ochie ahụ, dara tomato n'okpuru bushes ma gbaa ọkụ. Mkpụrụ ọjọọ, osisi rere ure na ala akọrọ bụ ebe a na-emepụta ihe maka pathogens, ụmụ ahụhụ na pests.
Lekọta ala gburugburu osisi. Na-emeghe mgbe nile, wepu ahihia na ata, na mgbe owuwe ihe ubi, gwuo ala miri emi.
Ọtụtụ mgbe, ndị iro kachasị ize ndụ maka mkpụrụ vaịn bụ ndị beps. Ị nwere ike ịlụso ha ọgụ site n'enyemaka nke ọnyà na ọnyà, nbibi nke nests nkedi na saịtị ahụ, na-eji mmiri ọgwụ na-atụgharị.
Ma, ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ịchekwa ihe owuwe ihe ubi ahụ, kechie ọkpụkpọ ọ bụla na akpa akwa akwa. Ọrụ abụghị maka umengwụ ma chọọ oge na ọnụahịa, ma arụmọrụ nke usoro ahụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100%.
I kwesịghị ịjụ igbochi ọrịa ndị dị otú ahụ dị ka oidium na anthracnose, bacteriosis na chlorosis, ọrịa cancer na rubella. Na saịtị anyị, ị ga-ahụ ihe ọmụma zuru ezu banyere ọrịa ndị a na ọrịa ndị ọzọ nke osisi vaịn ahụ ma nwee ike iji ihe niile dị mkpa n'oge kwesịrị ekwesị.
Ọbụbụenyi bụ ụdị dị iche iche dị iche iche na-eto eto na saịtị ọ bụla. A nabatara ya maka ezigbo ntu oyi na-eguzogide, magburu onwe ya igbochi ọrịa dịgasị iche na ntụgharị. Kwesịrị ekwesị maka ịṅụ ihe ọṅụṅụ, ebe obibi na iri nri. Site na nlekọta anya kwesịrị ekwesị, mkpụrụ vaịn ga-emepụta ihe ọma kwa afọ ma bụrụ ezigbo mma n'ime ubi n'etiti osisi ndị ọzọ na osisi mkpụrụ osisi.
N'etiti akwa-ekwenye iche iche nwere ike ịmata Onyinye Magaracha, Alex na Nchekwa Dombkovskaya.
Ezigbo ọbịa! Wepu nzaghachi gị na ụdị mkpụrụ vaịn Druzhba dị iche n'okpuru ihe ndị dị n'okpuru ebe a.
Chanterelle mushrooms ọgwụgwọ
Akpụ Egg na agba agba - Ancona
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ All-purpose table muskatny grade - Enyi enyi: foto na nkọwa